Arrimaha Dhulka, Hantida iyo Deegaanka - BBC Somali
Arrimaha Dhulka, Hantida iyo Deegaanka
Dastuurka Qabyada ah waxaa ku xusan in Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ah uu isku dayay inuu wax ka qabto qaar ka mid ah arimahaan. (Cutubka 5).
Qodobada waaweyn ee Dastuurka Qabyada ah ee la tacaamulaya dhulka iyo hantida waxaa weeye:
-Sida ku cad wax bixinta Dastuurka Qabyada ah, dowlada federaalka ah waa in ay samayso siyaasad qaran oo dhulka ku aadan, taasoo la tacaamuleysa xuquuqda maareynta, lahaanshaha iyo diiwaangelinta, dukumiintiyada dhulka, helitaanka iyo la wareegidooda.
-Waa in ay jiraan maamulo loogu tala galay lahaanshaha dowlda, isticmaalka iyo sii iibinta dhulka dowlada.
-Dowlad federaal ah waa in ay isku daydo in ay dib u soo celiso hantidii dowlada iyo dhulkii sida tuugonimada ah ee aan habboonayn dadka kale ay u isticmaaleen.
-Dowlad federaal ah waa in ay isku daydo in ay dib ugu soo celiso dadkii lahaa wixii dhul ah ama hanti ah oo dad kale si tuugonimo ah oo aan habboonayn ay ugala wareegeen.
Qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon karaa mid halis weyn ay ka imaan karto sida beer miineysan oo kale balse hadana arintani waxay noqon kartaa tilaabo weyn oo loo qaadayo dhinaca soo celinta caddaalada.
Dhanka deegaanka, Dastuurka Qabyada ah wuxuu ku andacoonayaa in dhammaan kheyraadka dabiiciga ah oo ay kujiraan macdanta, xayawaanka duur joogta ah, dhirta iyo daaqu ay yihiin hanti dowladeed. Arintani miyay ku tahay hadal laga fahmi karo hadal la yiri shakhsiyaadka ayagu ootay dhul daaqsin loogu tala galay oo dadka ka wada dhexeeya ayagoo u rogay wax kaligood ay tahay in ay isticmaalaan?
Halkii uu ka jiro xaalufinta deegaanka ama in lagu shubaayo qashin sumeysan, Dastuurka Qabyada ah wuxuu dowlada ka ballan qaadayaa in gadaal loo rogo xaalufka oo sidoo kalena la hor istaago howlo kale oo intaa dheer kuwaasoo sababaya. Sidoo kale waa in la qaado wixii qashin ah oo sumaysan lana hor istaago in qashin kale lagu soo shubo wadanka, isla mar ahaantaana la goobo mag dhawga qashinkii sida sharci darada ah loogu soo daadshay.
Dastuurka Qabyada ah aad ayuu ugu dadaalayaa sidii badbaadinta deegaanka looga dhigi lahaa arin ah xuquuqul insaan( Qodobka 30, hoos ka eeg).